Soo dejisan ALLPlayer 8.8.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: ALLPlayer
ALLPlayer – ciyaaryahan functional taas oo ay taageertaa badan oo qaabab warbaahinta. Software ayaa u saamaxaaya in ay la shaqeeyaan Playlists, loo maqli karo files warbaahinta iskharribeen, qabsato subtitles, ka dhigi screenshots iwm Waxyaabaha kala duwan ee ALLPlayer waa awooda of control dheer Cinwaan, ciyaaryahanka ayaaba falanqaynta iyo qaab subtitles dheer inta lagu jiro mudada waqti go’an u habboon reading. Software ka kooban editor video oo ay ku jiraan qalab reserved faylasha video ah. ALLPlayer sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad bedesho muuqaalka ciyaaryahanka iyada oo loo marayo abuuridda harag kala duwan ee baahida user ka.
Taageerada qaabab warbaahinta kala duwan
Astaamaha sareeya inay la shaqeeyaan subtitles
Waxaa la dhisay-in editor video
Taageerada tuuryo keyboard
Soo dejisan ALLPlayer
Faallo ku saabsan ALLPlayer
ALLPlayer Xirfadaha la xiriira
Guitar Pro – softiweer ka shaqeeya batoonnada, qalabka dabaysha iyo xargaha xadhkaha. Softiweerku wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda dhawaaqa ugu macquulsan ee aaladaha.
Tool si ay ula xiriiraan dadka dunida ku. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la xiriirto in hab video shir iyo in ay is dhaafsadaan macluumaadka.
Wadarta Amniga guud ee Bitdefender – xalka fayraska casriga ah ee casriga ah si kor loogu qaado ilaalinta macluumaadka shaqsiyadeed ee ka dhanka ah weerarada websaydhka, khayaanada, spam, rootkits, spyware, iyo spyware.